हे भगवान ! कस्तो बच्चा जन्मियो नि ! डाक्टर नै डराए (भिडियो हेर्नुस्) – Ramailo Sandesh
बाझुरा जिल्लामा एउटा् अ’नौठो बच्चा जन्मिएको छ । बच्चा १ केजि को मात्र छ । शरिरमा प्रस्ट रुपमा हा”डै हा’ड देखिन्छ । हेर्दै माया लाग्दो बच्चो !कस्तो नि’स्टुरी दै’ब पनि ।ग’रिबलाई पि’डामाथी झ’न पी’डा । डाक्टरका अनुसार उक्त बच्चा कु’पोषणबाट पि’डित छन ।
दुर्गम जिल्लामा जन्मिएको बच्चालाई पोशिलो खानेकुरा, भिटामिन प्रोटिन को क’मि भएको छ । आमाले पनि ग’र्भ अ’वस्थामा सन्तुलित भोजन नपाएका कारण यस्तो बच्चा जन्मिएको डाक्टरले जनाएका छन । यो बच्चालाई पहिलो पटक देखेको हस्पिटल परिवार समेत च’कित बन्यो ।
उच्च ग’रिबिका कारण यो परिवारलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ’ धौ,ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारसग सम्पतिको नामम गधा छ । एउटा झुप्रो घर छ । सम्पती नै नभएपछि सन्तानको कसरी उपचार कसरी गर्न सकुन ।कस्तो बि’डम्बना !
सेरागुड थापाको परिवारले सहयोग रकम सङ्कलन नगरेको पनि हैन । कतै बाट पार नलागेपछी उनिहरुलाई छोरा बचाउन ह’म्य ह’म्य भएको छ । अहिले सामाजिक अभियन्ताको सक्रियतामा उनलाई काठमाडौ स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ल्याईएको छ ।
बच्चालाई उपचार गर्न २ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएको छ ।कान्ति बाल अस्पताल र सरकारले यो बच्चालाई निशुल्क उपचार गर्दिन सामाजिक अभियन्ताले पहल गर्दै आएका छन । बच्चालाई ICU मा राखेर तत्काल उपचार प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । प्रस्तुत छ भिडियो सामग्री ;